Shiinaha ilaalinta deegaanka banaanka si fudud qurxinta alwaaxda balaastikada WPC soosaarayaasha iyo alaableyda | Lihua
Ilaalinta deegaanka ee qurxinta bannaanka qurxinta qoryaha caaga ah ee WPC
Lahaanshaha Alaabada:Cuskado WPC
Bixinta:TT / LC
Midabka:Qaxwaha, Shukulaatada, Qoryaha, Qoryaha Casaanka, Geedka kedarka ah, madow, Cawl, iwm
Port Shipping:Dekedda Shanghai
Waqtiga Lead:15-25 MAALMO
2.2m, 2.9m, 3.6m ama loo habeeyay
Park, beer, buundada buurta
Jilicsan, cadayasho leh, Super embossing
Taageero farsamo oo khadka tooska ah
Cawl, kafee, shukulaato, geedo, iwm
●Cuskado WPC waxaa si weyn loogu isticmaalaa buundada baarkinka iyo buundada buurta
si loo ilaaliyo amniga dadka. Waxaan leenahay dhowr nooc oo ahCuskado WPCs si loo qanciyo baahiyaha macaamiisha kala duwan. Sidoo kale taabashada hadhuudhka dabiiciga ah iyo taabashada, tani waxay la kulmi kartaa shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Qalabka gacanta ee WPC waxay leeyihiin naqshad qurux badan oo qurux badan iyo dayactir si fudud cayayaanka u adkaysta iyo qalafsanaanta sare Bay'adda u fiican, dib loo cusbooneysiin karo oo aan lahayn kiimiko kale oo khatar ah, oo keydineysa kheyraadka keynta.
● Waxaan leenahay warshad noo gaar ah, midabka iyo cabbirka waxaad ku xulan kartaa xulashadaada. Fadlan xor u noqo inaad na weydiiso.
Hore: Bannaanbaxa 130x10mm caag ah oo balaastig ah oo isku dhafan oo WPC ah
Xiga: Iska caabinta Cimilada Hawada Isugeynta WPC Hollow Decking
Jaantuska rakibida ee soo dejinta alwaax caag ah Lishen
Q1: Mudo intee le'eg ayaa caaryadaadu si caadi ah u shaqeysaa? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta? Maxay tahay awoodda nooc kasta oo dhimanaya?
J: Sida caadiga ah hal caaryada ayaa shaqeyn karta 2-3 maalmood, waanu ilaalin doonaa amar kasta ka dib, awoodda set kasta way ka duwan tahay, looxyada caadiga ah maalin maalmaha ka mid waa 2.5-3.5ton, 3D alaabooyinka la duubay waa 2-2.5ton, wada shaqeyn alaabada soo-saarista waa 1.8-2.2ton.
Q2: Waa maxay habka wax soo saarkaagu?
A: 1.Waxaad hubisaa tirada iyo midabka amarka macaamiisha
2.Artisan waxay diyaarisaa caanaha waxayna samaysaa muunad si loo xaqiijiyo midabka iyo daaweynta macaamiisha ka dib
3.Kadib samee granulation (Diyaarso walxaha), ka dibna wuxuu bilaabi doonaa wax soo saar, alaabada soo-saarka ayaa lagu ridi doonaa goobta gaarka ah, mar dambe ayaan sameyn doonaa daaweynta ka dib, ka dibna waxaan xirxiraa kuwan
Q3: Mudo intee le'eg ayay tahay waqtiga dhalmada ee caadiga ah ee alaabtaadu?
J: Way ka duwanaan doontaa iyadoo loo eegayo tirada. Guud ahaan waxay ku saabsan tahay 7-15 maalmood hal weel 20ft ah. Haddii 3D la isku qurxiyo iyo alaabada la wada saaro, waxaan u baahanahay 2-4 maalmood oo guud ahaan ah geedi socodka isku dhafan.
S4: Ma haysaa tirada ugu yar ee dalab ah? Hadday sidaas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku?
J: Guud ahaan waxaan haysannaa tirada ugu yar, waa 200-300 SQM Laakiin haddii aad rabto inaad buuxiso weelka illaa miisaanka xaddidan, alaabooyin dhowr ah ayaan kuu sameyn doonnaa!
Q5: Waa maxay awoodaada guud?
J: Guud ahaan awooddeena guud waa 1000 tan bishiiba .Sidaa waxaan kudaridoonaa khadadka wax soosaarka oo dheeri ah, tani way sii kordheysaa waqtiga dambe
Q6: Intee ayey le'eg tahay shirkaddaadu? Waa maxay qiimaha wax soo saar sanadle ah?
J: Lihua waa Shirkad Sare oo Cusub iyo Teknolojiyad Casri ah, oo daboolaysa warshad 15000 sq mitir ah oo ku taal Langxi Indusrial Zone.Waxaan haysannaa in ka badan 80 shaqaale, kuwaas oo dhammaantood leh khibrad shaqo oo WPC ah.
S7: Waa maxay qalabka baaritaanka aad haysaa?
J: Warshaddeenu waxay leedahay tijaabiyaha guryaha ee Farsamada, Tijaabiyaha dab-damiska, tijaabiyaha ka-hortagga is-daba-marinta, Miisaanka, iwm.
Q8: Waa maxay nidaamkaaga tayada?
J: Inta lagu guda jiro soosaarka, QC-yadu waxay hubin doontaa cabirka, midabka, dusha sare, tayada, ka dib waxay heli doonaan qayb muunad ah oo lagu sameeyo tijaabada hantida farsamada. Sidoo kale QC waxay sameyn doontaa daaweynta ka dib si ay u hubiso haddii ay jiraan wax aan la arki karin Marka ay sameynayaan daaweynta kadib, waxay sidoo kale hubinayaan tayada.
Q9: Waa maxay wax soo saarkaaga wax soo saar? Sidee lagu gaadhay?
J: Wax soo saarkeenu waa in ka badan 98%, maxaa yeelay waxaan xakameyneynaa tayada marka ugu horeysa, laga bilaabo bilowga sheyga, iyaga QC ayaa xakameyn doona tayada marka la soo saarayo, sidoo kale farsamayaqaanku wuxuu hubin doonaa oo cusbooneysiin doonaa qaaciddada marwalba.
Q10: Muddo intee le'eg ayuu shaqeynayaa inta soo hartay ee alaabooyinka WPC?
J: Waxay ku saabsan tahay 25-30 sano oo lagu jiro xaalado habboon.
S11: Waa maxay muddada bixinta aad aqbali doonto?
J: Eray bixinta waa T / T, Western Union iyo wixii la mid ah.
Q12: Isbarbar dhigga qoryaha, waa maxay faa iidada ay leedahay wax soo saarka WPC?
J: 1aad, alaabooyinka WPC gebi ahaanba bay'ada u fiican, waa 100% dib loo warshadeyn karo.
2aad, waxyaabaha WPC waa biyuhu, qoyaan-caddayn, aboor iyo caariyaysi anti-caaryada.
3aad, alaabooyinka WPC waxay leeyihiin awood sare, duugoob iyo jeexitaan hoose, waa barar la'aan, cillad la'aan mana jabto
WPC cuskado loogu talagalay jaranjarooyinka Gudaha
Super Embossed biyuhu Wood caaga WPC Holl ...
Bannaanka Dabka Dabka Dabka WPC Hollow Dec ...
Bannaanka Biyaha Baarkinka Biyuhu ee WPC Dec ...
Bannaanka 130x10mm caag ah biyo isku dhafan oo caag ah ...
Dhirta Joogtada ah ee Loogu Talogalay Deegaanka Fudud ee W ...
UV-iska caabin ah Easy Rakibaadda Isku darka Wood ...
Qurxinta banaanka ee WPC, Dabaqa WPC, Bannaanka WPC decking, Gogosha WPC, alwaax decking isku dhafan, Qurxinta WPC,